သမ္မာကျမ်းစာ > သမ်မာကမျြးသင်တန်း > ဗတ္တိဇံတရားဆိုတာဘာလဲ?
ရေဗတ္တိဇံ - ယုံကြည်သူ၏နောင်တရခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာ၊ ယေရှုခရစ်ကို သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသောနိမိတ်လက္ခဏာသည် ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၊ မီးဖြင့်" နှစ်ခြင်းခံခြင်းဆိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် နှစ်ခြင်းခံခြင်းဖြင့် နှစ်ခြင်းခံခြင်းကို ကျင့်သုံးသည် (မဿဲ ၂8,19; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 2,38; ရောမ 6,4-5; လု 3,16; 1. ကောရိန္သု ၁2,13; 1. ဓာတ်ဆီ 1,3စာ-၉; မက်သယူး 3,16).
ကားစင်တင်မသတ်မီ ညနေတွင် ယေရှုသည် မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုယူ၍ “ဤကား ငါ့ကိုယ်တည်း … ဤသည် ငါ၏ပဋိညာဉ်တရား၏အသွေးဖြစ်သည်…” ဟုမိန့်တော်မူပြီး သခင့်ညစာစားပွဲကိုကျင်းပသည့်အခါတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုရရှိကြသည်။ ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ကို အောက်မေ့၍ သေခြင်းတရားကို ကြွလာတော်မူသည်တိုင်အောင် ကြွေးကြော်ကြလော့။ သခင်ဘုရား၏ညစာစားပွဲသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်အကြောင်း မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်၍ အသွေးကိုသွန်းလောင်းတော်မူသော ငါတို့သခင်၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် စားသုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။1. ကောရိန္သု 11,23နှစ်ဆယ် 10,16; မဿဲ ၂6,26-28 ။
နှစ်ခြင်းနှင့်သခင့်ညစာစားပွဲသည်ပရိုတက်စတင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ဒေသနာအမိန့်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအမိန့်များသည်ယုံကြည်သူများအတွက်အလုပ်၌ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏အမှတ်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုထင်ရှားစွာပြသခဲ့သည်။
“ဘုရားသခင့်ညစာစားပွဲနှင့် သန့်ရှင်းသောဗတ္တိဇံတရားနှစ်ပါးစလုံး ... ကျွန်ုပ်တို့သည် ခြွင်းချက်မရှိလက်ခံထားသော ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အမှန်တရားကို ကြေငြာကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခြွင်းချက်မရှိ ခြွင်းချက်မရှိ ခြွင်းချက်မရှိ အခြားသူများထံသို့ ခြွင်းချက်မရှိ ပေးဆောင်ရမည့်တာဝန်ကို လက်ကိုင်ပြု၍ ပခုံးချင်းယှဉ်ရပ်ကာ၊ ငါတို့ဆီ ရောက်သွားပြီ” (Jinkins၊ 2001၊ p. 241)။
သခင်ဘုရား၏ဗတ္တိဇံနှင့် သခင့်ညစာစားပွဲသည် လူ့အယူအဆမဟုတ်ကြောင်း နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သူတို့သည် ခမည်းတော်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ထင်ဟပ်ပြီး ခရစ်တော်က စတင်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားမိန်းမတို့သည် နောင်တရသင့်သည်ဟု ဘုရားသခင်က ကျမ်းချက်၌ဖော်ပြထားသည် (ဘုရားသခင့်ထံလှည့်ပါ - သင်ခန်းစာ6ကိုကြည့်ပါ) အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် နှစ်ခြင်းခံပါ (တမန်တော်၊ 2,38) ယုံကြည်သူများသည် သခင်ယေရှု၏ မုန့်နှင့် စပျစ်ရည်ကို “အောက်မေ့ခြင်း” ဖြင့် စားသင့်သည် (1. ကောရိန္သု 11,23-26) ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ သာသနာပြုအမိန့်တော်များသည် ဓမ္မဟောင်း ထုံးတမ်းများနှင့် မတူဘဲ “အနာဂတ်ဥစ္စာ၏အရိပ်” မျှသာဖြစ်ပြီး “နွားနှင့်ဆိတ်သွေးဖြင့် အပြစ်များကို ဖယ်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်” ဟူသော (ဟေဗြဲ၊ 10,1.၄)။ ဤထုံးတမ်းများသည် ဣသရေလလူမျိုးကို ကမ္ဘာနှင့်ခွဲ၍ ဘုရားသခင်ပိုင်အဖြစ် ခွဲထုတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းက လူမျိုးအားလုံးမှ ယုံကြည်သူအားလုံးသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ တစ်သားတည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေပါသည်။
ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် ပူဇော်သက္ကာများသည် ထာဝရသန့်ရှင်းမှုနှင့် သန့်ရှင်းမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ပထမပဋိညာဉ်၊ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ပဋိညာဉ်ဟောင်းသည် အသက်ဝင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ဘု​ရား​သ​ခင်​က “ဒုတိယ​ကို​သုံး​နိုင်​အောင် ပ​ထ​မ​ကို​ကောက်​ယူ​ပါ။ ဤအလိုတော်အရ၊ ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ကြိမ်နှင့်အမျှ သန့်ရှင်းခြင်းခံရသည်” (ဟေဗြဲ၊ 10,5-10) ။
ဖိလိပ္ပိ၌ 2,6-၈ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သူ၏မြင့်မြတ်သောအခွင့်ထူးများကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် လူဖြစ်လာခဲ့သည်။ သခင်ဘုရား၏ဗတ္တိဇံနှင့် သခင့်ညစာစားပွဲသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ပြုပေးသောအရာကို ပြသသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များကို ပြသသည်။ ဗတ္တိဇံသည် ယုံကြည်သူအတွက် အတွင်းပိုင်းတာဝန်ဝတ္တရားနှင့် ဆည်းကပ်ခြင်း၏ အပြင်ပန်းဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် ၎င်းသည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့် ဆည်းကပ်မှုတွင် ပထမဆုံးပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် တက်ကြွခြင်းသို့ နှစ်ခြင်းခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“ဗတ္တိဇံသည် ငါတို့ပြုသောအရာမဟုတ်၊ ငါတို့အတွက်ပြုသောအမှု” (Dawn & Peterson 2000၊ p. 191)။ ပေါလုဤသို့ရှင်းပြသည်– “ယေရှုခရစ်၌ နှစ်ခြင်းခံသောသူအပေါင်းတို့သည် မိမိသေခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ကို သင်တို့မသိကြသလော။ (ရောမ 6,3).
ယုံကြည်သူအား ဖုံးအုပ်ထားသော ဗတ္တိဇံရေသည် ခရစ်တော်၏ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရေမှထခြင်းသည် ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်သို့တက်ကြွလာခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်– “ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နှင့်အမျှ၊ ငါတို့သည်လည်း အသစ်သောအသက်တာ၌ ကျင်လည်ကြလိမ့်မည်” (ရောမ၊ 6,4ခ) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေဖြင့် လုံးလုံးလျားလျား ဖုံးလွှမ်းနေသည်ဟူသော သင်္ကေတကြောင့် “သေခြင်းသို့ နှစ်ခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် သူနှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံရသည်” ကို ကိုယ်စားပြုသည် (ရောမ၊ 6,4က) ကမ္ဘာချီချာ့ချ်သည် လုံး၀နှစ်မြှုပ်ခြင်းမှတဆင့် ဘုရားသခင်၏ဗတ္တိဇံကို ကျင့်သုံးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အသင်းတော်သည် အခြားဗတ္တိဇံနည်းများကို အသိအမှတ်ပြုသည်။
ဗတ္တိဇံ၏သင်္ကေတက ကျွန်ုပ်တို့အား “ကျွန်ုပ်တို့၏အဘိုးအိုသည် အပြစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ၊ ယခုမှစ၍ အပြစ်တရား၏အစေကိုမခံစေခြင်းငှာ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောလူဟောင်းကိုပြသည်” (ရောမ၊ 6,6) ခရစ်တော်သည် အသေခံပြီး တစ်ဖန်ထမြောက်တော်မူသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဝိညာဉ်ရေးအရ သေပြီး သူနှင့်အတူ ထမြောက်ကြောင်းကို ဗတ္တိဇံက သတိပေးသည် (ရောမ၊ 6,8) ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ပေးသော ဆုကျေးဇူးကို မြင်သာအောင် သရုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး “ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်ရှိစဉ်အခါက ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံတော်မူသည်” ဟူသောအချက်ကို ပြသသည် (ရောမ၊ 5,8).
သခင့်ညစာစားပွဲသည် အမြင့်ဆုံးသောကယ်တင်ခြင်းလုပ်ရပ်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မေတ္တာကို သက်သေခံပါသည်။ အသုံးပြုထားသော သင်္ကေတများသည် ပျက်စီးနေသော ခန္ဓာကိုယ် (မုန့်) နှင့် သွန်းသောသွေး (ဝိုင်) ကို ကိုယ်စားပြုပြီး လူသားများကို ကယ်တင်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်သည် သခင့်ညစာစားပွဲကို စတင်ကျင်းပသောအခါ၊ တပည့်တော်တို့အား မုန့်ကို ဝေငှပြီး “ယူသွား၊ စားပါ၊ ဤအရာသည် သင်တို့အတွက် ပေးသော ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်” (1. ကောရိန္သု 11,24) ယေရှုသည် အသက်မုန့်၊ “ကောင်းကင်မှလာသောအသက်မုန့်” (ယော 6,48-58) ။
သခင်ယေရှုသည်လည်း စပျစ်ရည်ခွက်ကို ပေးတော်မူပြီး “သင်တို့အားလုံး၊ ထိုမှသောက်ကြလော့၊ များစွာသောသူတို့အတွက် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအတွက် သွန်းသော ငါ၏အသွေးသည် ပဋိညာဉ်၏အသွေးဖြစ်သည်” (မဿဲ ၂။6,26စာ-၂၈)။ ဤသည်မှာ “ထာဝရပဋိညာဉ်၏အသွေး” (ဟေဗြဲ ၁း၁)3,20) ထို့ကြောင့်၊ ဤပဋိညာဉ်သစ်၏အသွေး၏တန်ဖိုးကို လျစ်လျူရှုခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့်၊ ကျေးဇူးတော်၏စိတ်ဓာတ်ကို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသည် (ဟေဗြဲ၊ 10,29).
ဗတ္တိဇံသည်ခရစ်တော်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်ထပ်ခါတလဲလဲတုပခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့သခင့်ညစာစားပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့သောခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အသွေးတော်၌အကြိမ်ကြိမ်တုပခြင်းနှင့်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပသခါပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများပေါ်လာသည်။ ပသခါပွဲသည် သခင့်ညစာစားပွဲနှင့် မတူသောကြောင့် သင်္ကေတလက္ခဏာမှာ ကွဲပြားပြီး ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ကိုယ်စားမပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပသခါပွဲသည် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်ပြီး၊ “ဤမုန့်ကိုစား၍ ဟင်းရည်ကိုသောက်သည်နှင့်အမျှ၊1. ကောရိန္သု 11,26).
ပသခါသိုးသငယ်၏အသွေးသည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအတွက် သွန်းခြင်းမဟုတ်ပေ၊ 10,11) ယုဒဘာသာတွင်ကျင်းပသော နိုးနိုးကြားကြားညစာစားပွဲ၏ ဓလေ့သည် အီဂျစ်ပြည်မှ ဣသရေလအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးနေ့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။2. မောရှေ ၁2,42; ၅ မို ၁6,1); အပြစ်လွှတ်ခြင်း၏ သင်္ကေတမဟုတ်ပေ။
ပသခါပွဲကျင်းပခြင်းအားဖြင့် အစ္စရေးတွေရဲ့အပြစ်တွေကို ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ပသခါသိုးသငယ်များကို သတ်သည့်နေ့တွင်ပင် ယေရှုကို အသေသတ်ခဲ့သည် (ယော ၁9,14) ပေါလုက “အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၌ ယဇ်ပူဇော်ခံရသော ခရစ်တော်တည်းဟူသော ပသခါသိုးသငယ်လည်း ရှိ၏” (1. ကောရိန္သု 5,7).
သခင့်နှစ်ခြင်းနှင့်သခင့်ညစာစားပွဲသည်အချင်းချင်း၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊
“သခင်တပါးတည်း၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံအားဖြင့်” (ဧဖက် 4,5) ယုံကြည်သူများသည် “သူ၌စည်းလုံး၍ သေခြင်း၌ သူကဲ့သို့ဖြစ်” ကြသည် (ရောမ 6,5) ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် နှစ်ခြင်းခံသောအခါ၊ သူ သို့မဟုတ် သူမသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ရရှိထားကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်က အသိအမှတ်ပြုသည်။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်များသည် အသင်းတော်၏ မိတ်သဟာယတွင် နှစ်ခြင်းခံကြသည်။ “အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဂရိလူဖြစ်စေ၊ ကျွန်ဖြစ်စေ၊ လူလွတ်ဖြစ်စေ ဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းအားဖြင့် တကိုယ်တည်းဗတ္တိဇံကိုခံ၍၊1. ကောရိန္သု ၁2,13).
သခင်ယေရှုသည် သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သော အသင်းတော်၏ မိတ်သဟာယဖြစ်လာသည် (ရောမ ၁2,5; 1. ကောရိန္သု ၁2,27; ဧဖက် 4,1-၂) ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွတ်၊ မရှုံးဘူး (ဟေဗြဲ ၁3,5; မဿဲ ၂8,20) ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဤတက်ကြွစွာပါဝင်မှုကို သခင်ဘုရား၏စားပွဲတော်၌ မုန့်နှင့်ဝိုင်သောက်ခြင်းဖြင့် အားဖြည့်ပေးပါသည်။ စပျစ်ရည်၊ ကောင်းကြီးပေးသောခွက်သည် "ခရစ်တော်၏အသွေးတော်နှင့် ဆက်ဆံခြင်း" နှင့် မုန့်၊ "ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆက်ဆံခြင်း" သာမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်သူအားလုံး၏ဘုံအသက်တာတွင် ပါဝင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ "ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည် မုန့်တစ်ခုတည်း၌ ရှိသမျှသော ကြောင့်၊ ငါတို့သည် တကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏။"1. ကောရိန္သု 10,16-17) ။
သခင့်ညစာစားပွဲနှင့် ဗတ္တိဇံနှစ်ပါးစလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွင် မြင်သာသောပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သွားလေရာရာ၌ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံစေရမည်အကြောင်း သခင်ယေရှုက သူ၏နောက်လိုက်များအား မိန့်မှာခဲ့သည် (မဿဲ2Nov.8,19) ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည့်သူများ၏ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းတွင် ယုံကြည်သူများကို ဗတ္တိဇံပေးရမည့် ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 2,38 ဗတ္တိဇံသည် “အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်” နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လက်ဆောင်ကို လက်ခံရရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် “ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထမြောက်ခြင်း” (ဆိုလိုသည်မှာ ဗတ္တိဇံရေမှထမြောက်သောအခါ၊ ခရစ်တော်၌ အသက်တာသစ်သို့ထမြောက်သောအခါ)၊ 3,1.၁၃; ဧဖက် 4,32) ဗတ္တိဇံ ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးစလုံး ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံယူခြင်း ဖြစ်သည်။
သခင့်ညစာစားပွဲကို တစ်ခါတစ်ရံ “မိတ်သဟာယ” ဟုခေါ်သည် (သင်္ကေတများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်နှင့် အခြားယုံကြည်သူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကို ပေးသည်ဟူသော အယူအဆကို အလေးပေးသည်)။ မုန့်နှင့် စပျစ်ရည်ကို မပေးမီ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကို ခရစ်တော်ပေးခဲ့သော ဂရိဘာသာမှ "ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း" ဟုလည်း ခေါ်သည်။
စပျစ်ရည်နှင့် မုန့်ကိုယူရန် အတူတကွစုဝေးသောအခါ၊ သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်၏အသေခံခြင်းကို ကျေးဇူးတင်စွာကြေငြာပါသည်။1. ကောရိန္သု 11,26) ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသူများနှင့် ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အချင်းချင်း ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ပူဇော်သက္ကာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို မျှဝေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည်။
ခရစ်တော်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် အခြားသူများနှင့် မထိုက်တန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့စီရင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ အန္တရာယ်ရှိသည်။ ခရစ်တော်က “သင်တို့သည် စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကို မပြုကြနှင့်” ဟုဆိုခဲ့သည်။ (မဿဲ၊ 7,1) ပေါလု ရည်ညွှန်းသည်မှာ ဤအရာပင် ဖြစ်သည်။ 1. ကောရိန္သု 11,27-29 ရည်ညွှန်း? ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွင့်မလွှတ်ပါက၊ သခင်ဘုရား၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် အားလုံး၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ကျိုးပဲ့နေခြင်းကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် နားလည်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မပလ္လင်သို့လာ၍ ခါးသီးစွာ ခွင့်မလွှတ်ပါက၊ ထိုဒြပ်စင်များကို မထိုက်တန်သောနည်းဖြင့် စားသောက်နေပါသည်။ စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေးသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းချုပ်ငြိမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည် (မဿဲကိုလည်း ကြည့်ပါ။ 5,23-24) ။
ဗတ္တိဇံနှင့်သခင့်ညစာစားပွဲသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာ ၀ ိညာဉ်ရေးရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူအများကိုးကွယ်မှုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ grace ၀ ံဂေလိတရားကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့သည်ယုံကြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သမ္မာကျမ်းစာကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ထားသောကြောင့်ငါတို့၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။